Yenza ibhodi yeMood ukuyila umzobo wophawu lwentengiso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa sidibana phambi kwe Iiprojekthi zoyilo lwe logo okanye isazisi somzobo yohlobo, sinokuba neengxaki ezithile ukuguqula izindululo okanye izimvo esinazo engqondweni. Amaxesha amaninzi kwenzeka kuthi ukuba kufuneka senze inkcazo kumthengi ngendlela uyilo olunokuba ngayo, kwaye amagama okanye izikhombisi zisilele ukuhambisa umbono ngokucacileyo.
Inokuya ngenye indlela, umthengi unokufuna ukubonisa umyili umbono wokuba unophawu, kwaye isishwankathelo esibhaliweyo asonelanga. Oku kuyicothisa inkqubo yoyilo, kufuneka senze utshintsho oluninzi, kwaye amaxesha amaninzi abathengi banokungoneliseki. Kule meko, kukho isixhobo esiliqabane elihle labayili befashoni kwaye ukuba, ukuba siyinika ithuba, sinokusinceda abayili bemizobo ukuba babone ngokubonakalayo izimvo zethu: ibhodi yemood.
Ibhodi yeeMood ibe nobubele ikholaji esekwe kumbono okanye inkuthazo. Ndiyakwazi yiza neefoto, imifanekiso, amabinzana, imibala, iifonti okanye uburhabaxa. Ngamafutshane, nayiphi na into, njengoko igama layo libonisa, idlulisela kuthi imvakalelo efanayo. Ukuba sifuna ukuyila uphawu lokuqubha, umzekelo, singasebenzisa iifoto zamanxweme, imithi yesundu, ulwandle, imibala yombala phakathi kohlaza okwesibhakabhaka nephuzi, ukuthungwa kwesanti, ukushicilelwa kwenkumba yolwandle, njl.
Oku ukwandisa umbono wethu wento esifuna ukuyila, Asishiywanga nje sinezimvo zelogo ezifana nophawu lwethu, kodwa isisondeza Iziphumo ezibonakalayo zonke ukuba siyintoni isazisi sakho. Ukongeza, kuluncedo kakhulu ngakumbi ekuchazeni imibala kunye neefonti, eziyizinto ezinonophelo olukhulu kunye nexesha lokukhetha kwabo.
1 Uyakha njani ibhodi yeMood
1.1 Chaza into oyifunayo
1.2 Fumana izinto ezibonakalayo
1.3 Kwidijithali okanye ngokwasemzimbeni
1.4 Qalisa ukuyila
Uyakha njani ibhodi yeMood
Ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwemifanekiso oza kuyithwala ngebhodi yeMood, kufuneka uyenze ukuqiqa kuthathelwa ingqalelo: into umthengi ngokwakhe ayivakalisile ukuba uyayifuna uphawu lwakho, incasa kunye neempawu zabaphulaphuli ekujoliswe kubo uphawu, kunye igalelo lakho kunye nemibono njengomyili.
Ngolu lwazi luqokelelweyo, kufuneka Chaza ngokucacileyo kwaye iyahambelana into esifuna ukuyidlulisa iimvakalelo, imvakalelo kunye nezinto ezibonakalayo: ukufudumala, ukonwaba, ukuhamba, ukonwaba, ukukhanya kwelanga, ulwandle oluhlaza, ulonwabo, njl
Nje ukuba ezi zinto zikhethwe, lixesha lokuba sifune ukukhuthazwa!
Umfanekiso ophefumlelweyo wolwandle kunye nolwandle.
Fumana izinto ezibonakalayo
Sicebisa ukuba uqokelele ngokulinganayo zonke izinto ozifunayo: iifonti, iifoto, uburhabaxa, imibala, iipateni. Ukusuka apha ungathatha imifanekiso emininzi njengoko uthanda, malunga nama-30 umzekelo, kodwa ekugqibeleni kuya kufuneka khetha okona kulungileyo kwaye yintoni enye endiyaziyo lungelelanisa nento ofuna ukuyidlulisa.
Sukugqitha ekusebenziseni nayiphi na, Sukusebenzisa ngaphezulu kweefonti ezimbini, umzekelo, okanye ugcwalise ibhodi ngeefoto ushiya ecaleni ezinye izinto. Kubalulekile ukuba ungaguquguquki, sukufaka nantoni na engadibanisi ixabiso lokwenyani kwaye ubeke kuphela imifanekiso ebonisa ngokucacileyo into oyifunayo.
Ukuba uza kukhangela i-intanethi, IPinterest sesinye sezixhobo ezilungileyo onokuyisebenzisa. Ngapha koko, yenzelwe ukuba ibe yibhodi ebonakalayo ebonakalayo, ke thatha ixesha lokukhangela kwizalathiso kwaye wenze ibhodi yakho apho unokukhetha khona imifanekiso ekuncedayo. Kukho amanye amaphepha afana Behance, Dribbble okanye Unsplash inokukunceda kolu phando.
Umfanekiso ophefumlelweyo wolwandle.
Umfanekiso okhuthazayo, ucango oluyityheli lolwandle.
Kwidijithali okanye ngokwasemzimbeni
Ibhodi inokwenziwa ngokwamanani nangokwasemzimbeni. Ukuba uqhele ukuphatha iinkqubo kwaye kuya kuba lula kuwe, gcina imifanekiso yakho kwifolda kwikhompyuter yakho okanye kwibhodi yakho yePinterest, emva koko Sebenzisa i-Illustrator okanye i-Photoshop ukwenza ikholaji yakho.
Ukuba ungomnye wabo baziva bekhululekile ekwenzeni izinto zesandla, unokwenza eyakho ikholaji kwifiziksi, kwaye ungasebenzisa apha kwiimagazini, isitokhwe sekhadi, amaphepha anemibala, iphepha lodonga, okanye nayiphi na itrim ekusebenzela.
Nje ukuba uyile ibhodi yeMood, ungaqala ukuyila. Uya kubona ukuba esi sixhobo sibonakalayo siza kukunceda njani ukuba wenze ngakumbi ikhonkrithi kunye nezindululo ekujoliswe kuzo ezingcono ngokubhekisele kwinto efunwa ngumthengi wakho. Uya kuba neempazamo ezimbalwa kwaye kunokwenzeka ukuba wamkele uyilo ngaphandle kotshintsho olukhulu. Ukongeza, kuya kukunceda ukuba uphucule ngokulula ngakumbi yonke imifanekiso yesazisi, ukusuka kwilogo ukuya kwizinto zokubhala kunye nentengiso.
Ke ngoku uyazi, kuyilo lwakho olulandelayo, zama ukudala ibhodi yeMood!
Ibhodi yeemood yohlobo lokudada
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yenza ibhodi yeMood ukuyila umzobo wophawu lwentengiso